Ry sakaizako, mba fantatrao moa fa tia anao Jesosy? Moa fantatrao fa maty teo amin'ny hazofijaliana ho an'ny olombelona rehetra Izy?
Mbola zaza ve ianao sa efa zokiolona? Maty ho anao ihany koa Jesosy.
Ry havana mala ao amin'ny Tompo, sy ireo namana isany, jiolahy ve ianao, mpangalatra, mpandainga, mpamono olona, mpisandoka? Tia anao Jesosy ary te hamonjy anao.
...Mpanao ody, mpanompo an'i satana hatramin'ny fahazazanao ve ianao, mpanao ratsy amin'ny fiaraha-monina, mpamono ankizy, mpampijali vehivavy, lahilahy, mpihetraketraka, manapoizina ny mpiara-belona. Mihorohoro izay rehetra lalovanao satria tena mampidi-doza ianao, iatahan'ny fianakavianao ianao noho ny devoly ao aminao, noho ny fanahy ratsy ao aminao. Rehefa mba mihiratra ka mahtsiaro saina ianao dia manotany tena ny amin'ny antony ahavelomanao eto an-tany, saininao ny ataony mahatonga anao hanao izao asa ratsy rehetra izao, manontany tena ianao hoe dia nahavita izany ve aho? Zavatra iray loha no tsarovy, na habibiana toy iznay az ny fiainanao, tia anao Jesosy ary te hamonjy anao.
Boka hatrany an-tampondoha ka hatrany aam-paladia ve ianao, manana fahasembanana? Zavatra iray loha no tsarovy, tia anao Jesosy ary te hamonjy anao Izy.
Tovovavy mandany fotoana amin'ny fanimbana tokantranon'ny hafa noho ny hatsaran-tarehinao ve ianao? Mampivarilavo ny namanao ao am-pianarana, any amin'ny toeram-piasana, any an-tànana. Efa nanala zaza angamba ianao, na nitady hanapoizina ny namanao, ny fahavalonao, nampiteraka ady teo amin'izay naniry anao, ny sasany aza maty na mbola marary noho ny aminao, noho ny asa ratsinao. Manotany tena ny amin'ny antom-pisianao ianao ankehitriny. Tsaroanao daholo ny ratsy nataonao, ary dia manotany tena ny amin'ny valiny homanin'Andriamanitra ho anao ianao. Rehefa mieritreritra izany ianao dia mihorin-koditra satria efa nandre rahateo ny amin'ny hitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra araka ny asany avy, any indray andro any. Mitolona fatratra ianao, satria fantatrao fa ny helo no miandry anao. Mampahery tena kely ianao, ka minia mihevitra izany ho anganongano fotsiny, ary te hanery ny fieritreretanao hihevitra fa tsy misy Andriamanitra.